Manchester United Oo Kula Tartameysa Liverpool Xidiga Renato Sanches'
HomeHoryaalka FranceManchester United oo kula tartameysa Liverpool Xidiga Renato Sanches’
Manchester United oo kula tartameysa Liverpool Xidiga Renato Sanches’
December 23, 2020 Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay kula dagaalameyso Liverpool saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexeee Lille Renato Sanches .
23 jirkaan ayaa garoomada kaga maqnaan doona dhaawac muruqa ah laakiin waxa uu ku riyaaqay mudadii uu joogay France.
Sanches ayaa xilli ciyaareedkan u saftay sideed kulan kooxda Lille, oo haatan kaalinta koowaad kaga jirta qiimeynta Ligue 1, iyadoo ciyaaryahanka reer Portugal tan iyo markaas si aad ah loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Anfield iyadoo aan la hubin mustaqbalka Georginio Wijnaldum .
Si kastaba ha noqotee, Gazzetta dello Sport ayaa sheeganeysa in Man United ay sidoo kale xiiseyneyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee Dogues, halka Inter Milan ay il gaar ah ku heyso horumarka.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Lille ay marti qaadi karto dalabyada Sanches iyadoo loo baahan yahay in la isku dheelitiro dalabka 20m (£ 18.2m) oo laga yaabaa inuu ku filnaado in lagu abaalmariyo laacibkii hore ee Bayern Munich meel ka baxsan Stade Pierre-Mauroy.
Sanches waxay qandaraas la gashay kooxda Christophe Galtier ilaa dhamaadka ololaha 2022-23.